Dowladda Faransiiska ayaa sheegtay in ciidammadooda iyo kuwa xulafada la ah ay waqooyiga Mali ku dileen hogaamiyihii maleeshiyaadka Al-qaacidah ee gobolkaasi.
Wasiirka ciidammada qalabka sida ee Faransiiska, Florence Parly, ayaa sheegtay in Cabdulmaalik Droukdel lagu dilay howlgal Arbacadii la saameeyay isaga iyo dhowr qof oo ka mid ah dadkii aadka ugu dhawaa.
”Ciidamada Faransiiska ayaa sidoo kale bishiii May howgal ku soo qabtay sarkaal sare oo ka tirsan ururka isku magacaabay Dowladda Islaamiga ah.” ayay tiri
Cabdilmaalik Droukde waxa uu Al-Qaaciidda u qaabilsanaa waqooyiga Afrika, sidoo kale waxa uu abaanduule u ahaa ururka Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) oo xiriir la leh Al-Qaacidda.
Halka Mohamed Mrabat, oo ah ninka la qabtay uu ahaa jihaadi weyn oo jaga sare u hayay ururka Daacish ee ka dagaalama saxaraha Afrika.
Waa kuma Cabdimaalik Droukdel?
Waxa uu ku jiray da’da afartameeyada, waxa uuna ka qeyb qaatay dagaalkii Midowgii Soviet ee Afghanitan. Waxaa la sheegay inuu dhiirageliyihiisa ahaa hogaamiyihii hore Al-Qaacidda ee Ciraaq Abu Musab al-Zarqawi.
Intii uu ahaa hogaamiyaha Al-Qaacidda ee gobolka waxaa la qaaday weerarro waaweyn oo khasaare ba’an geystay, waxaana ka mid ahaa weerarkii lagu qaaday hoteel ku yaalay magaalada Ouagadougou ee Burkina Faso, kaasi oo ay ku naf-waayeen 30 qof, kuna dhaawacmeen 150 ruux.
Sannadkii 2012-kii ayaa maxkamad ku taalla dalka Aljeeriya isagoo maqan ku xukuntay dil toogasho ah kaddib markii lagu soo eedeyay xubin ka ahaanshiyaha urur argaggiso ah oo geystay weeraro qarax ah, oo uu ka mid ahaa weerar bambaano oo 2007-dii ka dhacay magaalada Aljeris kaasi oo lagu dilay 22 qof ilaa 200 00 ruxna dhaawacyo ka soo gaaray.
Gobolka Saaxil ayaa hoy u ah kooxo badan oo jihaad doon ah, qaar kooxda waxay ku xiran yihiin Al-Qaacida.
Image captionMadaxweynaha cusub ee Faransiiska Emmanuel Macron ayaa booqday ciidammada ku sugan Maali
In kabadan 5,000 oo askari oo ka mid ah ciidammada Faransiiska iyo 12,000 oo ka mid ah ciidammada Qaramada Midoobay ayaa hawlgallo ka waday Mali tan iyo sannadkii 2013kii, ka dib markii kooxaha jihaad doonka ah iyo malayshiyada Tuareg ay jabhadayn ka billaabeen waqooyiga dalkaas.
Laamaha Al-Qaeda uu ku leeyahay caalamka
Image captionMudaharaadyo looga soo horjeedo Mareykanka kaddib marki uu dilay Osama bin-Laden 2011-kii
Garabka Alqacida ee Maghreb– waxaa la aasaasay 2006-dii marki ay koox miliishiya oo ka dagaallanto Algeriya ay xiriir la sameeysteen Al-Qaacida. Cadaadis xooggan oo ay kala kulmeen ciidamada Algeeriya awgeedna ay saldhigyo ka sameeysteen degaanno ku yaalla Sahel iyo Galbeedka Afrika.
Garabka Al-Qaacida ee Jasiiradda Carabta- waxaa la aasaasay 2009-kii marki ay midoobeen laba kooxood oo kala ah shabakadda jihaad doonka caalamiga iyo koox kale oo Sacuudiga ka dhisneyd.
Garabka Al-Qaacida ee qaybta qaaradda Hindiya– garabkan waxay ka howl gashaa Afghanistan, Pakistan, Hindiya, Miyaanmar iyo Bangladesh wuxuuna garabkan aasaasmay bishi September 2014-kii.
Jamacatu Nusral-Islam wal-Muslimiin- Jabeecadan oo gacan saar weyn la leh ururka Al-Qaacida waxay ka sameeysmeen kooxa ka jiray Mali iyo Galbeedka Afrika oo midoobay.
Al-Shabaab- wuxuu ka howl galaa Soomaaliya iyo Geeska Afrika waxayna ururka Al-Qaacida xiriir la sameeysteen 2012-kii.
Kooxda Xayaat Taxriir al-Sham- waxay ka sameeysantay kooxo islaamiyiin ah oo ka dagaallama dalka Suuriya waxayna kooxda xiriir la leedahay ururka Al-Qaacida sida ay qaramada midoobay sheegtay. Kooxduna waxay hadda gacanta ku haysaa gobolka Idlib ee Waqooyiga Suuriya.
Garabka Al-Qaacida ee Masar- waa koox xiriir la leh ururka Al-Qaacida waxayna kooxdu ka howl gashaa Gacanka Sinnaay ee dalka Masar.